Uruguay: Fahalasanan’ny mpanoratra Mario Benedetti · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2009 21:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Italiano, Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Nodimandry teo amin'ny faha-88 taona niainany ny mpanoratra sady poety Orogoaiana Mario Benedetti tamin'ny 17 May. Nihoatra ny 80 ny bokin-tantara noforonina nosoratany, ankoatra ny tononkalo sy sombintantara ary andrana izay anisan'ny asa sorany, ary voadika tamin'ny teny vahiny eo ho eo amin'ny 20 eo. Olobe eo amin'ny fiarahamonina Orogoaiana tokoa i Benedetti, indrindra noho ny tantarany tahaka ny an-tsesitany sy noho ny fitondra-teniny nandritra ny fitondrana jadon'ny miaramila anelanelan'ny taompolo 1970 ka hatramin'ny taompolo 1980.
Maro tamin'ny mpamaham-bolongana Orogoaiana no mamakafaka ny dikan'ny tsangan'asany amin'izy ireo taona maro taty aoriana rehefa nandre ny fahafatesany. Ny mpamaham-bolongana ao amin'ny Psicosesion [es] no mamelabelatra ny mety ho hitan'ny tsirairay ao amin'ny asa soratr'i Benedetti amin'izao toe-draharaha mamaivay diavin'ny tantaran'ny faritra izao:
Ahitana taratra ny fahasarotana lalina indrindra nodiavin'i Amerika Latina nogiazan'ny jadona, fa tsy voahaja ny zon'olombelona, ka anehoany amim-pahakingana fijalian'ny olona, nahatonga an'i Mario nandeha an-tsesitany nandao ny fireneny nandritra ny fotoana maharitra ny asa-sorany.
Na izany aza dia nataon'i Mario matetika izay handrenesana ny feony na aiza na aiza misy azy…tsy nampangina azy velively ireny.
Nanoratra ny fahatsapany manokana koa i Gaba en Montevideo [es] ary nasehony fa niritsoka taminy nandritra ny fiainany ny tenin'i Benedetti’:
Maty i Beneditti , ary tahaka izany ihany koa, tamin'ireo teny roa (telo amin'ny teny malagasy) monja ireo dia nandao ahy aingam-panahiko ary niafina tao ambadiky ny tononkalo anarivony. Tononkalo anarivony sy tantara iray miverimberina, tahaka ny voamariky ny afo eo amin'ny fiainan'ny Orogoaiana maro dia maro sy amiko ihany koa. Anisan'ny tsiaroko i Benedetti. Nandany ny androko sy ny aliko niaraka tamin'i Benedetti aho namaky ny traikefany, ny fahasahiany, ny tantara maha-olo-tsotra azy. Lasa ao anatin'ny rako, ao anatiko, ny sangan'asany, ary tahaka ny rivotra fohiko hitomboako. Ary (ny asa-sorany no) famantaranvaratro.
Mpamaham-bolongana Orogoaiana, Mario Blanco, no mahatsiahy ny fotoana nihaonany tamin'i Benedetti sy nahazoany fanolorana voasonia tamin'ny bokiny (dedication) [es]. Mirehareha manokana noho ny maha-“tocayo” amin'ny Benedetti i Blanco, izany hoe mitovy anarana ry zareo. Ankoatra izany dia mbola mitovy fanombohan'anarana ihany koa fa samy “MB”
Nandritra ny naha-antsesitany azy nandritra ny folo taona dia nandany ny androny tany Espaina, Kiobà ary Però i Benedetti. Tsy hoe izy nonina tany amin'ny firenena miteny Espaniôla ihany no nampalaza azy manerana ny faritra, fa nanakoako tany amin'ny firenenkafa iharan'ny fitondrana jadona ihany koa ny teniny sy ny fandresendahatra tao aminy.
Nihoatra sisintany ny asa sorany, ary dia nizara ny traikefany ihany koa ny mpamaham-bolongana any amin'ny firenena Amerikana Latina tahaka an'i Modestamente Humano [es] avy any Goatemalà izay nanoratra hoe:
Amin'ny fanolorana ny tononkalony, any amin'ny farany, milaza ny zavatra tian'ny hafa holazaina, saingy angamba tsy manana talenta mahalaza azy mazava amin'ny fomba tsotra, mahitsy ary mahafinaritra.
Avy any amin'ny Repoblika Dominikana i Alexéi Tellerías ao amin'ny Catarsis Diaria [es] nomanoratra “Mario, manao veloma anao ara-batana fotsiny izahay satria fantatray ianao fa miara-mipetraka aminay.” Nanamarika i Zenia Regalado fa nandalo tany Kiobà i Benedetti raha nandeha an-tsesitany [es] ary niasa tao amin'ny House of the Americas (Tranon'i Amerika) tao La Havanne.
Mpamaham-bolongana hafa avy any amin'ny firenena nandehanany an-tsesitany dia ilay Peroviana Juan Carlos De La Fuente oo amin'ny Noticias del Interior [es] no nanoratra fa niaina tanteraka ny fiainany ilay mpanoratra Orogoaiana:
Eto amin'ny dingany fiainako izao, taorian'ny fahafatesana sy fahaterahana indray nodiaviko izay, dia fantatro fa niaina izay nosoratany i Mario Benedetti ary nanoratra izay niainany. Ary fantatro fa sambatra izy, araka ny teny mety hampiahiahy ny hafa ho tsy misy fo, amin'ny teny hafa – araka izay nolazain'i Borges sy ny namako Luz María Sarria hoe – tsy nisy andro izay tsy naha-tany am-paradisa azy tamin'io fotoana io.
Misotra Jentilisa for translating my article!
01 Jona 2009, 00:39